सबैको गन्तब्य यहि हो जतिसुकै लोभ र लालच गरेपनि एक दिन म’र्नु नै छ
हामि सबैलाई लाग्ने गर्छ कि मेरो यति धेरै सम्पत्ति छ, मेरो यस्तो चिनजान छ, मेरो यस्तो बलियो छोरा – छोरी वा आफन्त छन् । तर याद गरौँ त ! के हामीलाई हाम्रो मृत्यु को समयमा इनले बचाउन सक्छन् ?आखिर जीवन छोटो छ । जतिसुकै लोभ र लालच गरे पनि एक दिन मर्नु नै छ । प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालसँग के थिएन र ?
पछिल्लो अवस्थामा मासु र र’क्सि’ को से’वन अ’त्याधिक गर्ने लत बसेका प्रकाशको मृ’त्यु भएपछि अहिले प्र’चण्ड पनि एक्लो बनेका छन् । युद्धकालमा प्रचण्डले कतिका ज्यान लिए होलान्, कतिलाई घरबार बीहीन बनाए होलान् तर आफ्नै छोराको पनि अकालमा मृ’त्यु हुन्छ भनेर सायद उनलाई सपनामा पनि बिश्वास थिएन होला ।
जब पशुप’तिमा आफ्नो छोरालाई दाग’बत्ती दिंदा प्रचण्डको हात काम्यो र आँखा बाट आँशुका धारा बगे यसैले प्रमा’णित गर्छ कि जीवन आखिर केहि पनि छैन ।दिनका दिन पार्टी र मोज गर्ने अनि तरुनी र पैसाको लतले मस्त भएकाहरुको पनि मृत्यु समान नै हुने गर्दछ अनि अन्तीम स्थान पशुपतिनाथ नै बन्ने गर्दछ र सडकमा बसेर मागेर खानेको पनि अन्तीम स्थान भनेको पशुपतिनाथ नै हो ।जब हामि मरेर जान्छौं , यो सम्पत्ति अनि नातागोता कुनै पनि काम लाग्दैन ।
न हामीलाई नातागोताले बचाउन सक्छ न त सम्पत्ति ले । त्यसैले नगरौं व्यर्थको अभिमान । नगरौं अभिमान मेरो सम्पत्ति छ र मेरो यस्तो नाता छ भनेर । जीवन छोटो छ केवल सत्कर्म गरौँ र सत्कर्मले नै जीवनको सदुपयोग गरौँ । यो विचार यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो त ? आफ्नो विचार राख्नुहोस् तथा कुरा चित्त बुझे एक एक शेयर गरेर साथ् दिनुहोस् ।